टुक्का कविता के हाे ? कसरी लेखिन्छ ? – नेपाली गजल – Nepali Ghazal
२०७७ चैत्र २२, आईतवार ११:२१ गते
संस्कृतको तुक शब्दबाट तद्भवीकरण भएर बनेको तुक्का शब्द र संस्कृतकै स्तोक शब्दबाट बनेको टुक्रो शब्दबाट परिष्कृत रूपमा जन्मेको टुक्का शब्दको कर्तन प्रक्रियाबाट नव परिष्कृत रूपमा टुक्का शब्द बनेको हो । यो शब्दकोशमा भएको पुरानो टुक्रा अर्थ वा वाक्पद्धतिको सङ्कुचित अर्थको टुक्का मात्र नभएर एउटा नवीन अवधारणा सहितको टुक्का कविता हो । जसमा टुक्काको अग्र अंश टुक् र तुक्काको पश्च अंश का मिलेर नव परिमार्जित रूप टुक्का शब्द जन्मिन पुगेको हो । दुई शब्दका नश्लको मेल भई हाइब्रिड रूपमा तयार भएको टुक्का कवितामा बाबा र आमा दुवैका गुण अस्वभाविक मानिँदैन । कर्तन पद्धतिबाट शब्द बन्ने प्रक्रियालाई भाषाविज्ञानमा पनि ससम्मान मान्यता दिइएको छ । बँदेलको बँ र सुँगुर को गुर हुँदै बँगुर (बङ्गुर) बनेको उदाहरणले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यसरी टुक्का शब्द प्राचीन रूप नभई नव निर्मित हाइब्रिड रूपको जन्म भएको हो । दुई हरफको मौलिक नेपाली कविता नै टुक्का कविता हो ।
टुक्का कविता के हो ?
टुक्का कविता दुई शब्दको योगबाट बनेको एक पदावली हो ।
खासमा टुक्कारूपी कविताको विग्रहबाट कर्मधारय समास भई बनेको समस्त शब्द टुक्का कविता नै यसको वास्तविक नामकरण हो । यसरी निःसर्त भएको टुक्का कविताको टुक्का शब्दले विविध अर्थ बहन गरेको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार तुक शब्दको अर्थले शास्त्रीय पद्य रचनाका प्रत्येक पाउका अन्त्यमा पद वा अक्षरको समान आवृत्ति वा एकता, अन्त्यानुप्रासको एक रूप, तर्क वा बुद्धिसहितको सहमति वा सङ्गति, तुक्का भन्ने बुझाउँछ भने तुक्का शब्दले तुकबन्दीयुक्त पदावलीलाई बुझाउँछ । त्यस्तै टुक्का शब्दले अन्त्यानुप्रास मिलेका कविता वा गीतको सानो अंशलाई बुझाउँछ । साथै अभिव्यञ्जनापूर्ण टुक्रे वाक्य वा वाक्पद्धतिलाई बुझाउँछ । कोशीय अर्थमा मात्र नभई यहाँ प्रयुक्त टुक्का कविता कुनै गीत वा कविताको अंश होइन । यो त दुई पङ्कित भएर नि आफैँमा पूर्ण तुकबन्दीयुक्त अनुभूतिको एक झट्का कविताको लघुत्तम रूप हो । यसरी दुई आँखा जस्ता आफैँमा सुन्दर र पूर्ण दुई हरफमा पुरा हुने कविता नै टुक्का कविता हो ।
वास्तवमा हामीले कविता बारेमा कुरा गरिरहँदा प्रतीकको रूपमा एउटा रुखलाई लिन सकिन्छ । कविता जति पुरानो हुँदै गयो त्यति यसका हाँगाहरु उपविधाको रूपमा विभिन्न लेखन शैली र नाम लिएर जन्मिँदै फैलिँदै गइरहेका छन् । यसरी समय सापेक्षरूपमा नयाँ विधाहरु जन्मिनु, त्यसको अभ्यास हुनु, अनि हुर्किएर साहित्य आकाशमा एउटा नयाँ चौतारीको रूपमा स्थापित हुनु साहित्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
साहित्यको लोकप्रिया विधा कविता र त्यसैको लघुत्तम रूपअन्तर्गत पर्ने नवोदित एक छुट्टै उपविधा विशेषलाई टुक्का कविता भनिन्छ । विधागत प्रवर्तनका हिसाबले हेर्दा टुक्का कविता विशुद्ध नेपाली माटोमा मौलिक शैलीमा हुर्किँदै गरेको नेपाली कविताको एउटा सुन्दर रूप हो । लघु संरचनामा आउने टुक्का कविताले भावको एक झिल्कोदेखि सिङ्गो सङ्कथनलाई बहन गर्ने उच्च क्षमता राखेको हुन्छ । शब्दान्तरमा भन्ने हो भने छोटो भए पनि आफैँमा पूर्णात्माको धाराणासहित आविर्भाव भएको टुक्का कविता सागरमा गागर भर्ने बेजोड शक्ति र कवि कल्पनाको उच्चतम रूप हो ।
यसका आरम्भक ताराप्रसाद चापागाईं हुनुहुन्छ भने यसको परिकल्पना एवम् सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि निर्माण तथा सशक्त सङ्गठनात्मक स्वरूप दिने कार्यमा कविद्वय श्रीकृष्ण शर्मा र ताराप्रसाद चापागाईं नै हुनुहुन्छ । अहिले धेरै कविहरू सक्रिय रूपमा यसमा सिर्जनारत हुनुहुन्छ । धेरै कविहरूको आत्मीय छत्रछायामा यसको प्रवर्तनपछि स्थापना, विस्तार र उन्नयन भएको जानकारी गराउँछौँ । साथै यसलाई हुर्काउने बढाउने मलजल गर्ने कविहरूमा शर्मिला श्रेष्ठ, हिउँकला खतिवडा, जगतबाबु थापा, नानीमाया सुनुवार, ईश्वरी अधिकारी र रचना शर्मा प्रतिक्षाको विशेष भूमिका रहेको छ । यस टुक्का कवितालाई दुःखको झरीमा न्यानो छाता प्रदान गरी सल्लाह सुझाउ दिने उल्लेखनीय र प्रशंसनीय कार्य कवि तथा समालोचक अरुण नदी खत्रीबाट भएको स्मरण गर्न चाहन्छौँ । टुक्का कवितामा सक्रिय कलम चलाउनु भएका नेपाल, भारत लगायत बिभिन्ने देशहरुमा रहुन भएका कवि साहित्यकारहरुमा आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
जे होस् दुई हरफका समअक्षर संरचनामा पूर्ण हुने टुक्का कविताको विधागत परिचय, केही नमुना प्रस्तुति, यसको सिर्जनात्मक प्रयोग र सम्भावनालाई पस्कनु नै यस लेखको मूल अभिप्राय हो ।
टुक्का कविता कसरी लेख्ने ?
आदिम मानव सभ्यताभन्दा पनि जेठो मानिने कविता साहित्यकै सर्वप्रचीनतम विधा हो । पहिला कविताले नै साहित्यलाई बुझाउँथ्यो । यसरी आमाबाट अहिले छोरी बन्न पुगेपनि आमालाई सम्मान दिँदै योग्य आमाको सुयोग्य छोरी बन्न सकेको विधा हो कविता । स्वयम् कविता पनि साहित्यको पर्याय थियो भने अहिले साहित्यको एउटा अंश वा भाग या भनौँ एउटा प्रिय विधा मात्र बन्यो । यसैले आँखारूपी साहित्यको नानी टुक्का कवितालाई मान्न सकिन्छ । सागररूपी साहित्यको थोपा थोपा पानी हो यो टुक्का कविता । यिनै थोपा थोपा मिलेर नै सागर अस्तित्वमा आउँछ । हुन पनि पृथ्वीको आफ्नै अस्तित्व छ । सौर्य परिवारमा उसको सम्बन्ध अटुट पनि छ । तर, पृथ्वीलाई सूर्यको अंश पनि त मानिन्छ । त्यस्तै कविता विधाभित्र टुक्का कविता हो भन्न उपयुक्त हुन्छ । यसको रूप पक्षको कुरा गर्दा समअक्षर सङ्ख्या हुनु पर्ने हुन्छ । भने भाव पक्षमा समग्र काव्यिक व्यष्टि र समष्टिको प्रचुर सम्भावना रहन्छ । शब्द मात्र थुपारेर भावको प्रकटीकरण नभएको कविता टुक्का कविता हुन सक्दैन । अर्थात् भावबिना टुक्का कविता निष्प्राण बन्न पुग्छ । विषयको उठान, विस्तार, समर्थन र उत्कर्षको बैठान यसमा हुनुपर्छ । यसको लेखनका लागि पहिला आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्नु र जान्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ ।
टुक्का कविताका आधारभूत सिद्धान्त :
(क) टुक्का कविता नेपाली माटोमा हुर्किएको सरल एवं मौलिक कविता विधा हो ।
(ख) टुक्का कविताको संरचनामा जम्मा दुई हरफ हुन्छन् । यसका दुई हरफमध्ये पहिलोलाई आद्य पङ्क्ति र दास्रोलाई अन्त्य पङ्क्ति वा अन्त्य हरफ भनिन्छ ।
(ग) दुवै हरफमा अक्षर सङ्ख्या समान हुनुपर्छ । अक्षर सङ्ख्याको हकमा एक हरफमा कम्तीमा ५ अक्षरदेखि बढीमा २२ अक्षरसम्म राख्न सकिन्छ ।
(घ) सरल टुक्का कविता र बिम्बात्मक अभिव्यञ्जनपूर्ण, वा ध्वन्यार्थका व्यङ्ग्यात्मक प्रतीकात्मक गरी दुई किसिमले टुक्का कविता रचना गर्न सकिन्छ ।
(ङ) शब्दको पूर्णताभन्दा पनि भावको सघनता, तीव्रता र प्रभावकारी एवम् कलात्मक रचना हुनुपर्छ । दुवै हरफमा परस्पर सम्बन्ध भई प्रगाढ संसक्ति हुनुपर्ने ।
(च) दुवै हरफ अन्त्यानुप्रासयुक्त (तुकान्त) हुनुपर्ने तर मुक्तक र गजलमा जस्तो अन्त्यमा एक तुकान्तता बाहेक पूर्ण वा आंशिक शब्द पुनरावृत्ति गर्न पाइने छैन । साथै अतुकान्त हरफहरूलाई यसको दोष मानिएको छ ।
(छ) पहिलो हरफमा विषयको उठान, विस्तार र दोस्रोमा समर्थनसँगै समापन गरेको हुनुपर्ने । साथै दोस्रो हरफमा मूलभाव उत्कर्ष वा परिपाकमा पुगेको हुनुपर्ने ।
(ज) पहिलो हरफको अन्त्यमा व्याकरणात्मक छोटो विश्राम हुनु पर्ने र जनाउनकाे लागी अल्पविराम चिह्न (, ) दिनुपर्ने ।
(झ) कविताको अन्त्यमा कविताको भाव वा आवश्यकताअनुसार, (। ? !) अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक आदि चिह्नहरूको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने ।
(ञ) सकेसम्म गहकिला, सागरमा गागर भर्ने तुमुल भाव भएका थोरै शब्दमा वजनदार ,रसिलो, कसिलो र चोटिलो शब्दावलीको प्रयोग गरी लेख्न सकिने तर एउटै शब्दलाई पटक पटक नदोहो–याउने ।
(ट) भाषिक शुद्धतालाई ध्यान दिनुपर्ने । (नेपाली मानक भाषालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय झर्रा तथा ठेट नेपाली शब्द चयन गर्दा सुनमा सुगन्ध हुने ।)
(ठ) कविता आफैँमा अर्थपूर्ण हुनुपर्ने । कविताका गहाना अलङ्कार, छन्द, बिम्ब, प्रतीक, शब्द शक्तिका साथै विविध प्रयोगपूर्ण कलात्मक सिर्जना हुनुपर्ने ।
(ड) कविता जुनसुकै विषयमा पनि लेख्न सकिने तर धार्मिक, सांकृतिक, सामाजिक, ब्यक्तिगत संस्कार तथा स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरि कविताहरु लेख्न नपाईने ।
(ढ) कविताले अन्ततः वाचनबाटै पूर्णता पाउने हुँदा टुक्का कवितामा अक्षर गणना गर्दा लेखन तथा उच्चारण दुवैका आधारमा गरिने हुँदा कथ्य भाषाको प्रयोग पनि यथोचित गर्न सकिन्छ । साथै यो कविता पनि गेय नभई भाव प्रधान हुन्छ ।
(ण) टुक्का कविताको टङ्कण विशुद्ध देवनागरी भाषामा गर्नुपर्छ । सम्पादन समितिबाट सम्पादित टुक्का भने अवस्था हेरेर युनिकोडमा पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ ।
(त) कविताको स्तरीयता र काव्यिक गुण भए नभएको चेक जाँच गरेर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने । (यसका लागि टुक्का कविता सम्पादन समितिबाट सल्लाह र सुझाव लिन पनि सकिने छ । )
(थ) टुक्का कवितालाई हुबहु प्रयोग गरी वा केही कुरा थपघट गरेर साहित्यको अन्य बिधाको नाम दिएर तोडमोड गरि प्रकाशन पाइने छैन ।
टुक्का कविताका प्रकार र केही उदाहरणहरू :
दुई हरफको टुक्का कवितालाई विभिन्न ६ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । यसको लेखनका केही नमुनाहरुलाई यहाँ प्रस्तुत पनि गरिएको छ :
टुक्का कविताका प्रकारहरू :
(क) सरल टुक्का कविता
(ख) छन्द टुक्का कविता
(ग) व्यङ्ग्यात्मक टुक्का कविता
(घ) विविध रसमय टुक्का कविता आदि ।
टुक्का कविताका केही उदाहरणहरू :
(क) संरचनागत हिसाबले केही टुक्का कविताका उदाहरण :
कोही मुसा कोही बिरालो बनेर खेल्ने खेल,
बाँदरलाई के पच्थ्यो र बासमतीको सेल ।
– श्रीकृष्ण शर्मा
कोही मुसा र कोही बिरालो बन्नु – विषयको उठान
मुसा बिरालाको खेल खेल्नु –विषयको विस्तार
नेपालका बाँदरजस्ता नेता –विषयको समर्थन
बासमतीको सेल नपच्नू – विषयको समापन
नेपालका भोगी नेता के ल्याउँथे रेल,
छुचुन्द्राको टाउकोमा चमेलीको तेल ।
पहिलो हरफको अन्त्यमा र् + एल = रेल र दोस्रो हरफको अन्त्यमा भएको त् + एल = तेल शब्दमा दोहोरिएको भाग एलसमान परिवेशमा आएका रेल र तेल अन्तयानुप्रासले युक्त भएकाले यसैलाई तुक मिलेको भनिन्छ ।
राम्रो आँखाले हेर्नेलाई पो संसार हुने हो सुल्टो, – आद्य हरफ
चश्मा उल्टो भएपछि संसार घुम्ने रहेछ उल्टो । – अन्त्य हरफ
डुबाएर मलाई भँगालोमा,
रमायौ पराईको अँगालोमा ।
– ताराप्रसाद चापागाईं
यस टुक्का कवितामा पहिलो र दोस्रो दुवै हरफमा ११/११ समअक्षरको संयोजन छ । अत: यस्तो संरचनालाई मात्र टुक्का कविता मान्न सकिन्छ ।
(ख) छन्दोबद्ध टुक्का कविता :
धर्ती भिजाऊ पसिना चुहाई,
चम्कन्छ चोला सुन भाग्यदायी । (इन्द्रवज्रा छन्द)
पिलायौ तिमीले नशामा जवानी,
दिलायौ रचेको अनौठो कहानी । (भुजङ्गप्रयात छन्द)
रमाई हिँडेरै जवानी सकायौ,
नसोची पछाडी म सोझो फकायौ । (भुजङ्गप्रयात छन्द)
(ग) श्लेष अलङ्कार :
जसरी सूर्यको कर धर्तीमा फुल्छ सुदिन,
उसरी कर कर्ममा चल्दछन् भाग्य चम्किन ।
माथिको टुक्का कवितामा सूर्यको किरणले धर्ती सुन्दर फुलरूपी दिन जन्माए जस्तै कर्मशील हातहरूले निरन्तर कर्म गरेर आफ्नो भाग्य चम्काउँछन् भन्ने अर्थ प्रकट भएको छ । जसमा दुवै पङ्क्तिमा समान रूपले प्रयोग भएको कर शब्दले सूर्यको प्रकाश र हात भन्ने अर्थ प्रकटीकरण गरेकाले यहाँ श्लेष अलङ्कार बन्न गएको छ ।
(घ) ध्वन्यात्मक टुक्का कविता :
नानी प्यास बढ्यो खोली जान देऊ अब मलाई,
फूलहरू बाटो छेक्छन् ढिला होला चाल नपार्ई ।
एउटा नयाकले कुनै युवतीसँग खोलामा जान अनुमति मागेको छ । ऊ आफू कतै खोलको सुन्दर एवम् मनोरम वातावरणमा अर्की नायिकासँग एकान्त विहार गर्दा ढिला हुन सक्ने भित्री चमत्कार अर्थ ध्वनिका रूपमा आएको छ । त्यसैले यो वस्तु ध्वनिको उदाहरण हो ।
(ङ) विविध रसमय टुक्का कविता :
पिएर प्रेमका प्यालाहरू,
मेटाएँ मनका ज्वालाहरू । (शृङ्गार रस)
गुलाब छेउ उम्रेको काँडा मुटुमा बिझ्दछ,
चर्केर छाती म रुँदा रात आँसुमा भिज्दछ । करुण रसप्रधान
टुक्का कविता सानो हुन्छ तर महिम शक्तिमान् हुन्छ । थोरैमा धेरै भन्न सक्ने खुबी यसमा निहित हुन्छ । चोटिलो र कसिलो अनुभूतिको प्रवाह एवम् पुष्ट भावको खँदिलो प्रकटीकरण यसमा हुन्छ । दुई लाइन लेख्दैमा अन्त्यानुप्रास मिलाउँदैमा टुक्का कविता हुन्छ भन्नु मासु र हाड जोड्दैमा मान्छे बन्छ भन्ने डेढ अक्कल जत्तिकै मूर्खता हुन्छ । यति सानो दुई लाइनको कविता पनि हुन सक्छ भन्नेहरूले के भुल्नु हुँदैन भने यति सानो आँखाले यति ठुलो संसार हेर्न सक्छ भन्नु जति सार्थक हुन्छ त्यस्तै हो । आजको दिनरात व्यस्त मानवलाई महाकाव्यको पुराण लगाउने समय निकाल्नु अत्यन्त कठिन छ । अत: यसलाई भाव, लय, संरचना, विचार वा सन्देश प्रकटीकरण गर्ने मौलिक काव्य विधाका रूपमा हेर्नु आजको व्यस्त जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो
ङा केबु ठौ – शेर्पा भाषा